Raw Boldenone Acetate powder Mamboly sy mpanamboatra - orinasa
Ny vovo-bolidonidola Boldenone dia endrika iray an'ny Boldenone. Misy steroid anabolic androgenic modifiés amin'ny ester acetate. Ny Ester dia mitarika ny fitsaboana amin'ny alikaola sy ny antsasaky ny fiainana, na ny halavan'ny fotoana ny fanafody mampihatra ny asany na ny asa atao ao amin'ny vatana.
Vovon-ketsa vita amin'ny boletany Boldenone (2363-59-9)
Rano Acetate vita amin'ny Boldenone (2363-59-9) Description
Ny vovon'aretina volon-koditra Boldenone dia hampiroborobo kokoa ny selan'ny ra, hampitombo ny fiankinan-doha, ary ny fibres-pifamoivoizana izay mampiavaka ny bodybuilders mandritra ny fiofanana. Ny voankazo Acidate Raw Boldenone dia ho fanaintainana mafy. Ity steroid ity dia misy 25mg / ml ny hormone boldenone izay voasokajy ho an'ny etteta acetate ary 75mg / ml ny hormone boldenone voasariky ny espropate ester. Ny fananana Boldenone voatokana ho an'ireto esters ireto dia ahafahana mampiakatra ny tahan'ny ra ho haingana ary ho an'ny vokatra ho haingana kokoa noho ireo hita tamin'ny ecle tsy mahazatra an'ny EQ nentim-paharazana. Izany dia hahatonga ireo atleta mikatsaka ny hihazakazaka tsingerina faran'izay kely ary ireo izay manahy momba ny fitsaboana matetika ary mila manala ny hormonina amin'ny rafitra ao anatin'ny fotoana fohy.
Rano Acetate vita amin'ny Boldenone (2363-59-9) Specifications
Product Name Vokatry ny Acetate vita amin'ny Boldenone
Anarana simika 2363-59-9; Boldenone Acetate; BOLDENONE 17-ACETATE
molekiolan'ny Wvalo 328.452 g / mol
mitsonika Point 125-130 ℃
vayma- Point 443.6 ° C amin'ny 760 mmHg
Application Ny vody Acetate Boldenone dia steroid anabolic. Boldenone. Vokatry ny Acetate vita amin'ny Boldenone izay ampiasaina amin'ny fitsaboana veterinary.Bao Dan ketone dia mety hahomby sy mafy orina ary maharitra.
Inona no atao hoe vovoka Acetate Raw Boldenone (2363-59-9)?
Ny pneumatena Boldenone dia steroid anabolic avy amin'ny testosterone. Manana acetate ester amin'ny hetsika haingana izay miteraka fanafody haingana ao amin'ny rà, tsy toy ny cypionate sy undeyllenate izay mitaky andro 2. Inona no mampiavaka azy io? Ny halavan'ny androm-piainana dia mila ela kokoa mba hahazoana vokatra mahatsikaiky anabolika.
Ny volo-pandrefesana Boldenone dia endrika noforonina testosterone izay manana fifandraisana roa eo amin'ny 1 sy 2. Izany dia mampihena ny fahaizany manimba ny fiterahana sy ny herin'ny androgenic. Manana asidra acetic acetic to 17-beta hydroxyl group.
Ny poeta acetate Boldenone dia mampitombo tokoa ny fampidiran-drazy sy ny sela mena, izay midika fa ny sakafo ara-batana dia entina manerana ny vatana kokoa.
Ahoana ny vovoantom-panafody Raw Boldenone (2363-59-9) asa
Ny acetate esteran'ny Boldenone dia manana ny toetrany tsy manan-tsahin'ity steroid ity. Ny iray amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny vovon-tsakafo boldenone dia ny firafiny, izay mahatonga azy io tsy hiverina hivadika amin'ny estrogen. Na izany aza, misy ny fiantraikany amin'ny trangan-javatra sasany ao amin'ny estrogen raha ampiasaina amin'ny dosie avo, ka mahatonga ny fihazonana ny rano ho olana tsy misy, raha ampitahaina amin'ny zavatra hafa. Izany no mahatonga ny vovon-tsakafo boldenona safidy tsara ho an'ireo atleta miaritra izay tsy maniry ny mitondra rano rehefa mihazakazaka, na milomano, na bisikileta. Ankoatr'izay, ny vovony ety amin'ny boldenone dia manana fiantraikany ratsy ihany koa amin'ny mpampiasa milaza ny olana kely etrogenic sy ny fiovan'ny fanandramana sasany (izay mety hahasoa ireo izay miezaka ny mampihemotra betsaka). Izany no mahatonga an'io steroid io ho safidy tsara ho an'ireo te hanampy be dia be. Hatramin'ny plastika acetate boldenone dia manana ester somary lavitra noho ny versione unecylenate, azonao atao ny mampihena ny famantaranandro mba hahazoana vokatra haingana, tsy mila miandry herinandro.
Vovon-ketsa madinika Boldenone (2363-59-9) Dosage
Tokony atao amin'ny 300-700 mgs isan-kerinandro ny acetate Boldenone,
Amin'ny tsindrimandry dia farafaharatsiny isaky ny andro 2-3.
Rano Acetate vita amin'ny Boldenone (2363-59-9) soa
Ny Acetate Boldenone dia azo ampiasaina tsara amin'ny famokarana "andilan-drivotra" sy ny "famonoana" noho ny vokatra tsara mifandanja amin'ity akoran-javatra anabolika ity. Ity tsiranoka ity dia mamon-tena kely, ary vokatr'izany dia miteraka tsy misy fiantraikany eo amin'ny ejipsiana toy ny fihazonana rano na "gyno".
Ity steroid ity koa dia mampitombo ny herin'ny proteinina sy ny lanjan'ny tsiranoka mena, manamboatra ny fibobohan-java-bandy izay mitondra ny otrikaina manerana ny vatana kokoa. Noho izany, ny Boldenone Acetate dia afaka mampiasa bebe kokoa ny sakafo, manatsara ny fahaizany amin'ny hormone mahomby hampiasaina rehefa "manapaka".
Ankoatr'izay, ny sela miorina amin'ny tebiteby mibontsina noho io steroid io dia mampitombo ny fitaterana oksizenina manerana ny vatana, ka manome fanatanjahan-tena bebe kokoa ny atleta sy ny bakteria ary ny fahafahana miaritra sesintany mandritra ny fotoana lava kokoa, izay miharihary fa mahatonga azy ity Anisan'ireo mikasa ny handatsa-danja ny vatana.
Buy Buy Acidate Boldenone from Buyaas.com